Home Wararka Dibada Giriigga oo sheegay in uu kahor tagay 600 oo tahriibayaal uga soo...
Giriigga oo sheegay in uu kahor tagay 600 oo tahriibayaal uga soo gudbay Turkiga.
Giriigga ayaa sheegay in uu kahor tagay qaxooti dhan 600 oo ruux oo kasoo gudbay Badda Aegeran si ay u galaan waddankiisa, sarkaal katirsan Dowladda ayaa sheegay in dhanka Turkiga ay kasoo gudbayeen qaxootigaa.
Ciidanka Ilaalada Giriigga ayaa kahortagay Dadkaan oo aroornimadii Isniinta kasoo safray dhanka waddanka Turkiga ee xad-wadaagga ay yihiin si ay usii wadaan tahriibkooda sida uu sheegay afhayeen u hadlay Dowladda oo wareysi siiyay Wakaaladda Wararka AFP.
“Ciidanka Ilaalada Xeebaha ayaa ka war helay xogta tahriibayaal gaaraya 600 oo kasoo gudbiyay biyaha Aegean Sea, waddanka aan xad wadaagga nahay ee Turkiga ayay kasoo safreen oo sanadkaan dhowr jeer isku dayo badan aan kahor tagnay” ayuu yiri Afhayeenka la hadlay Wakaaladda Wararka Faransiiska AFP.
Waxa uu afhayeenkaan intaas ku daray in afartii bil ugu horreysay sanadkaan 2022 ay kordheen 30% Tahriibayaasha isaga kala gudbaya waddamada Giriigga iyo Turkiga si ay socdaalkooda qaaradda Yurub usii wadaan halka qaarkood ay saldhiganayaan waddankaan.
In ka badan 3 kun oo ruux oo qaxooti ah ayuu Giriigga diiwaangeliyay 2022 in ay gaareen dalkiisa, si loo yareeyo qulqulka soogalootiga xad-dhaafka ah waxaa heegan la geliyay Ciidamada ilaalada xeebaha maadaama xuduud badda ah ay la wadaagaan Turkiga
Previous articleRa’iisul wasaare Rooble oo lagu bogaadiyay dadaalkii uu ku bixiyay qabsoomidda doorashooyinkii dalka
Next articleWaa maxay sababta uu Ra’iisul Wasaare Rooble Shaqada uga joojiyay Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda?